सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएपछी परी तामाङले रुदै मिडिया सामु के भनिन,(भिडियो सहित) « Kalakhabar
प्रकाशित मिति : सोमबार, २४ बैशाख २०७५ १२:५८
कालाखबर संवाददाता,२४,बैशाख–काठामाण्डौ । भर्खरै मात्र सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरुमा परि तामाङको सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो भिडियो हेर्दा आम कलाकारहरुको इज्जत माथी नै प्रश्न तेर्सिएको छ । नाम कमाउन कति गाह्रो छ ,तर कमाएको नामलाई मेटाउन निकै सजिलो छ ।
परि तामाङलाई फसाउन कसैले यो गतिविधि तेस्र्याएको हुन सक्छे, या त तामाङ आफैको क्रियाकलाप हो, यो त पुष्टि हुन बाँकी नै छ । तर भिडियोमा हुबहु परि तामाङको गतिविधि देखिन्छ र चिनिन्छ । उनी भन्छिन यो क्रियाकलाप मैले गरेको होइन, तर भिडियोमा देखिएको केटो मेरो बोइफ्रन्ड हो पनि भन्दै छिन् ।
के आम जनमानसले उसलाई विश्वास गर्न सक्ला ? उनी भने गुहार मान्न प्रहरी कार्यलय हनुमान ढोका पुगिन् । प्रहरीले अपराधीलाई समातेर कठघर्रामा उभ्याउने आश्वसन आम जनमानसलाई बाडदैछिन् उनी । कानुनको रक्षक प्रहरीबाट यो त सम्भव होला या नहोला,हेर्न बाँकी नै छ ।
यो भिडियो कसरी सार्बजनि भयो ? किन भयो ? यस विषयमा परि तामाङकै शब्द र भाषामा थप जान्कारी लिन तलको भिडियो लिंकमा क्लिक गरेर हेरौ ।